Kuva munhu anobva kunyika yemuAfrica asi achigara muSouth Africa muna 2017 - What it means to be an African in South Africa in 2017 - Vernac News
Kuva munhu anobva kunyika yemuAfrica asi achigara muSouth Africa muna 2017 – What it means to be an African in South Africa in 2017
May 26, 2017 April 27, 2020 Vernac News
Kusiyana kwekubudirira kweSouth Africa nekwedzimwe nyika dzemuAfrica kuri pachena mune mashandiro nemashandisirwo emapazi ehurumende, mumagariro anoita vanhu zuva nezuva, mukushanda kwezvipatara ne zvikoro nezvivakwa zvehurumende (infrastrucuture), uye nemusimba remari. Inyika dzishomanane dzinokwikwidza ne South Africa, kusanganisira Egypt ne Nigeria, maererano nesimba rekutenga remari.
Vanhu vazhinji vekunedzimwe nyika dzemuAfrica vanokwezvwa nepfungwa yehupenyu muSouth Africa. Mukuona kwavo South Africa inovapa mukana urinane wekuumba hupenyu hwavanhoshuvira kurarama nemhuri dzavo pane wavanowana kunyika dzavo dzechizvarirwe. Nekuda kweizvi vanhu vazhinji vanosiya nyika dzavo dzechizvarirwe votora nzira vakananga kuSouth Africa kunotsvaga hupenyu hutsva. Kana vasvika vamwe vanotsvaga mabasa vachitumira mari kumisha dzavo kupera kwemwedzi wega wega, vamwe vanoenda nemhuri dzavo dzose vachironga kusadzoka kumusha zvachose.
Hupenyu munyika itsva hwagara huchiuya nezvidzidzo zvakawanda. Vanhu vanopedza makore akati kuti vachidzidza mitauro, mapfekero nedzimwe tsika dzevanhu vemuSouth Africa kuedza kurerutsa kunzwisisana nekugarisana zvakanaka nevavakidzani.
Vanobvawo mhiri kwemakungwa, sekuEurope ne kuAustrailia, vanouyawo kuSouth Africa semauyiro anoita vanobva kunyika dzemuAfrica, asi mawonerwe avanoitwa neruzhinji akasiyana neawo anoitwa vabvi vekuAfrica. Vanobva kumhiri kwemakungwa vanoonekwa neyemuro nerukudzo ruzhinji sezvo vachifungidzirwa kuti kuvemunyika kwavo kunobatsira mukukudza hupfumi hwenyika, kupfuura vabvi vekuAfrica.
Vabvi vekuAfrica vanoonekwa, kune dzimwe nzvimbo, sevasina kodzero nekuda kwekuti havazi zvizvarwa zvemuSouth Africa. Kune dzimwe nzvimbo vashanyi ava ndivovanofungidzirwa panoparwa chero mhosva; vanorarama hupenyu huzere nekutya. Makore mashomanane apfuura takakatyamadzwa nemhirizhonga yakatekeshera yakanangana nevatorwa pamusoro pekushaikwa kwemabasa nedzimwe nyaya. Izvi zvakashungurudza vashanyi vazhinji vaishaya kuti vozvipatsanutsa sei mumhirizhonga yaivatenderedza. Vamwe vaka dzokera kunyika dzavo dzekuzvarwa mushure mekuomerwa nehupenyu.
Zviitiko izvi zvakaburita pachena kupatsanuka kuripo kune dzimwe nzvimbo pakati pevatorwa vekunyika dzemuAfrica ne vazvarirwi vemunyika yeSouth Africa. Zvakaratidza kuti hapana kubatana pakatai pevanhu vanobva kunyika dzakasiyanasiyana dzemuAfrica, kusanganisira South Africa. Nyangwe zvichiratidzika kunze sepanekuwirirana pakati pevanhu vekunyika dzakasiya, kune zvakavanzika zvizhinji zvinobuda munguva yemhirizhonga zvinoratidza kuti vanhu vane zvavanonzwa zvakadzama zvavanotadza kubuditsa mumoyo dzavo neimwe nzira isiri mhirizhonga. Hurumende dzenyika dzinodyidzana neSouth Africa, kunyanya idzo dzemuSADC, dzinofanira kugadzira zvirongwa zvinokurudzira kutaurirana nekunzwisisana kuti mhirizhonga dzisawande. Muchiedza chimwe chete, hurumende dzinofanira kukurudzira kushanyirana pakati penyika dzemuAfrica, kuitira kuti vanhu vadzidze nezvedzimwe nyika nemararamiro netsika dzevanhu vekunedzimwewo nyika. Pakaita kunzwisisana pavanhu, mhirizhonga dzinodzikira.
Kurarama muSouth Africa mugore rino semushanyi hakuna kusiyana nekurarama kwemakore apfuura. Mune mamwe mapazi ehurumende nekushanda kwenyika mune mitemo inotora vazvarwi vemuno kutanga, vamwe vachizotorwawo kana nzvimbo dzasara. Izvi zvinoreva kuti mabasa anowanikwa kuno haana vimbiso yekugara kwenguva refu, kusiya kweavo vanozvishandira vakaita sevane mabhizimusi kuno, nevamwe vanobata chose chose kubva mukuita chizama-zama chekuchera goridhe vachitengesa kuzvika kuvamwe vanosenza muhurumende. Hunhu hwemunhu hunochinja, kazhinji kana vanhu vakagara nguva refu kuno vasingadzokeri kunoshanya kumusha. Vamwe venenge vavemimvuri yavanhu vavaimbova kare panguva dzavanofunga kuenda kumusha.
Nekuda zvezviitiko zvemakore apfuura, gore ra2017 rasiyana nemamwe makore nekuti kubvumidza (tolerance) nekunzwisisana kwevanhu venyika dzakasiyana kwawedzera. Mhirizhonga hadzina kuita mbiri mwaka uno nekuti vanhu kunzwisisa kwekushaya basa kwadzo kwawedzera. Kutekeshera kwekushandiswa kweIndaneti nevanhu vazhinji kwarerutsa kufamba kweruzivo zvekuti nhau dzivekukasira kufamba nekusvika kuvanhu. Izvi zviri kubatsira vanhu mukudzidzana nekuvaka hunhu humwechete.
Zuva reAfrica rinotirangaridza kukosha kwekubatana ne kugara zvakanaka pamwe chete kwevanhu vemuAfrica. Manzwi aVaKwame Nkrumah, vaimbove mutungamirira wenyika yeGhana, mugore ra1963 okuti, “Mubatanidzwa wemaAfrica ngauitike ikozvino. Hapana nguva kutambisa. Tinofanira kubatanidza zvino kana kuparara. Ndine chivimbo chekuti nekubatana uye kutsunga kwedu, isu tichaisa pano nheyo nokuda kuvaka mubatanidzwa weUnion of African States”, anotiyeuchidza kukosha kwekubatana kwemaAfrica kuita kuti vaenderere mberi nekusimudzira nyika ye Africa.
Nyika dzikashanidzana zvakanaka pamwe chete matambudziko anotambudza Africa anoita mashoma. Nyika imwe neimwe ikapa vanhu dzidzo yakafanana muridzi rwumwe chete misiyano iripo pakati pevanhu venyika dzakasiyana inodzikira. Hurumende dzemuAfrica ngadzipe vanhu mvumo yekushanya nekudzidza kune dzimwe nyika. Izvi zvose zvine chingwa chekukurudzira kubatana nekugarisana zvakanaka pakati pevanhu vemuAfrica kuitira kuti nyika yeAfrica ienderere mberi mubudiriro neruzivo, pamwe chete nekudzikisira mhirizhonga nemhonga mupopoto pakati pavanhu vanobva kwakasiyana vanogara munyika imwe chete.
Author: Simbarashe Nyatsanza
Makuphele ukuxhatshazwa kwamanina #KhangaUCT
iDA si-Spaza yona kuqala, manyan-nyan!